`Love story´ အပိုင်း ၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » `Love story´ အပိုင်း ၃
`Love story´ အပိုင်း ၃
Posted by aung nainglin on Jan 8, 2013 in Copy/Paste | 1 comment
သူလျှင်မြန်စွာ ဖရောင်းတိုင်ကို မီးထွန်းလိုက်သည်။ သည်တော့မှ သိပ်ချစ်ရသော ချစ်သူက သူကို မျက်စောင်းထိုးချင်းကို လျှပ်တပျက်အတွင်း ခံလိုက်ရလေသည်။
`မောင်…စီစဉ်ထားတာပေါ့လေ…….မောင်မကောင်းဘူးကွာ ဇူး အရမ်းကြောက်တက်မှန်း သိရက်နဲ့ဘာလို့ မီးကို ပိတ်ခိုင်းရတာလဲ……………..´
`မောင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို ဆုံးအောင်ကြည့် ပါအုံး…..ဇူးရယ်……….´
အခန်းထဲမှာ သူတို့ နှစ်ယောက်ရယ်….ဖျော့တော့တော့ အလင်းရောင်လေးရယ်…………ကန်သည့် အရာ အားလုံးကိုမေ့ ထားခဲ့ သည်ဟုဆိုရလောက်အောင် မေ့ ထားခဲ့ သည်ပဲလေ။
`စောစောတုန်းက ဇူး မောင့် ကို အံ့သြောအောင်လုပ်တယ်လေ…….. အခုတော့ မောင့် အလှည့် ရောက်ပြီလေ…………´
`ဘာလုပ်မလို့ လဲမောင်ရယ်……. ဇူးကိုပြောပြအုံးလေ………´
`မောင် ၀တ်လာတဲ့အပေါ်အင်္ကျီဘယ်မှာ သွားထားမိလဲ မသိပါဘူးကွာ…….´
`မောင်တော့ အပျှော်လွန်ပြီး အကျီင်္ပျောက်ပြီထင်တယ်……….´
`အဲ့ ဒီအင်္ကျီက အရမ်းအရေးကြီးတယ်……….´
`ဟုတ်ပါပြီမောင်ရယ် ဟုတ်မှာလေ….တခါးဝနားက အင်္ကျီချိတ်တဲ့ ချိတ်မှာ မောင်ချိတ်ခဲ့ တယ်လေ……..´
`ဟုတ်ပြီ….မှတ်မိပြီ ………….ကဲ ဇူး မျက်စီမှိတ်လိုက်နော်……….လုံးဝဖွင့် မကြည့် ရဘူးနော် မောင်က ဖွင့် လို့ ပြောမှ ဖွင့် ကြည့် ရမယ်နော်…………..´
သူအင်္ကျီရှိရာနေရာကို လျှောက်သွားခဲ့ လေသည်။ ပြီးတော့ အကျီင်္ရှိရာနေရာကို ရောက်တော့ အိပ်ကပ်ထဲက ပြာလဲ့ လဲ့ ဘူးလေးတစ်ဘူးကို ထုတ်ယူပြီး ချစ်သောဇူး ရှိရာနေရာကကိုရှောက်လာခဲ့ လေသည်။ ချစ်ရသော ချစ်သူလေးရဲ့အရှေ့ ကိုရောက်တော့ ချစ်သူနဲ့ အတူတူမထိုင်ပဲ ချစ်သူအရှေ့ မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး………………………………………………….
`ရပြီဇူး မျက်စီဖွင့် လို့ ရပြီ………….´
`ဟင် ဘာလုပ်နေတာလဲ မောင်…….ဇူးငရဲကြီးတော့မယ်……..ခုံပေါ်မှာ ထိုင်ပါမောင်ရယ်………..´
`ဇူး မေ့ ချင်မေ့ နေမှာပါ…….အပျှော်လွန်ပြီးတော့မေ့ သွားတယ်ထင်ပါတယ်……………ဒါပေမဲ့မောင်လဲ ဇူးနဲ့ ထပ်တူ ပျှော်ပါတယ်……….´
`ဘာကိုလဲ မောင်…..ဇူး သိပ်နားမရှင်းဘူး……….´
`အော် ဒီလိုပါ…….ဇူးရယ် ဒီနေ့ က ဘာနေ့ လဲ…….´
`အင်းဟုတ်ပါတယ် ပြီးတော့ ကျန်သေးတယ်လေ ဒီနေ့ က ဇူးရဲ့ မွေးနေ့ လေ……..´
`ဟာ ဇူးမေ့နေတယ်မောင်ရယ်……စောရီးပါနော် ဇူးကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ နော်………´
`ဇူးရယ်……..မောင်က ဘယ်တုန်းက ဇူးအပေါ်ကို စိတ်ဆိုးဘူးခဲ့ လို့ လဲကွာ………..´
`မောင်နဲ့ဇူးကို ဇူးမိဘတွေက သဘောတူလိုက်တာမှန်ပေမဲ့ …..မောင် ဇူးကို လက်ထပ်ခွင့် မတောင်းရသေးဘူးလေ….အဲ့ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ ကိုစောင့်နေတာပေါ့………ဒီလက်စွပ်လေးကလဲ မွေးနေ့ လက်ဆောင်မဟုတ်ပေမဲ့………..လက်ထပ်ခွင့် တောင်းတဲ့လက်စွပ်လေးပါ………..´
`မောင်ရယ် ဇူးဘ၀မှာလေ ဘယ်အရာမှ မလိုအပ်ပါဘူးမောင် မောင်ရှိနေရင်ပဲ………တစ်ဘ၀လုံး ပြီးပြည့် စုံပါပြီမောင်ရယ် မွေးနေ့ လက်ဆောင်လဲ မလိုအပ်ပါဘူး…….ပြီးတော့ လက်ထပ်လက်စွပ်လဲမလိုပါဘူး………တစ်ကယ်ဆို ဇူးက မောင့် ကို လက်ထပ်ခွင့် ပေးပြီးသားပါ……….မောင်က မပြောလို့ သာ ဇူးက ထုတ်မပြောတာပါ………..´
`ဇူးရယ် မောင်သိပ်ချစ်လိုက်တာကွာ…..ပေးပါအုံးဇူးရယ် မောင်ကိုယ်တိုင် ဒီလက်စွပ်လေးကို ဇူးရဲ့ လက်မှာ ၀တ်ပေးပါရစေနော်………´
ချစ်သူကမ်းပေးသော လက်ကလေးကို ညင်သာစွာ ဆုတ်ကိုင်ရင်း လက်စွပ်လေးကို ဆင်မြန်းပေးလိုက်လေသည်။
`အရမ်းလှတာပဲမောင်ရယ်……ဇူးတောင်စိတ်ပူနေတာလေ…….လက်စွပ်လေးက ဇူးရဲ့ လက်ချောင်းလေးနဲ့တော်မှတော်ပါ့မလားလို့ လေ……..အခုတော့ လွဲချော်ချင်းတောင်မရှိဘူးနော်…..´
`အင်းပေါ့ဇူးရယ် မောင်နဲ့ ဇူးရဲ့ အချစ်ကို ကံကြမ္မာက အသိအမှတ်ပြုလိုက်တာပဲပေါ့……….´
ရှေ့ သို့ ဆက်ပါအုံးမည်။အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားလျှက်…………….